Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Mipetraka ny rafitra fahaizana miady no hany miandry | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Mipetraka ny rafitra fahaizana miady no hany miandry
Sempotra ny sehatry ny fandraharahana, miatra aman’aina ny ezaka tsy maintsy ataon’ny maro an’isa mba ahafahany mitsikaraka ny ho hanina isan’andro mba tsy ho faty noana. Tolona avokoa izany. Manampy trotraka anefa etsy an-daniny ny herisetra ataon’ilay valan’aretina coronavirus izay tsy maintsy sedraina amin’ny toy ny fanaovana ady fanoherana fahavalo. Raha ny fitombon’ny isan’ny olona tratran’ilay aretina covid 19 sy ireo nindaosin’ny fahafatesana noho izy io, dia tsy hay lavina fa mahazo vahana ilay fahavalo tsy taza-maso.
Mitombo hatrany anefa ny fitaovana atao fiatrehana ny tsy fielezan’ny aretina sy fahafahana itsabo ny marary avy aminy. Iarahana mahafantatra fa ny tsy fanajana an’ireo fepetra fiarovan-tena izay sady fiarovana ny fiarahamonina no lesoka, makarakara araraotin’ilay fositra ahafahany miampitapita ampienaka an’ity valan’aretina ity. Mipetraka ny fanontaniana, moa ve tsy entitra toy ny tokony ho izy ny fanjakana eo amin’ny fampiharana ny fepetra ka mitarika olona maro andigana azy ireo ? Sa efa diso maro ny mponina izay efa safononoky ny fahasahiranana ka tsy hita ho ferana avokoa ? Eo ihany koa anefa ireo fepetra fa raha dinihana toa malefaka ihany ny sedra fanamelohan’ny lalàna ny fandinganana an’ireo fepetra samy hafa. Tsotra ny anton’izay, tsy manan-katao fomba famolahana andresena lahatra olona aman’arivony tsy hihoa-pefy ny fanjakana, ka na ametraka lalàna arak’izay aza, lasa vavany fotsiny tsy mandaitra ny lalàna. Vita eo ny amin’izany hoe tany tan-dalàna izany . Miala Ankatso ka Ambohidempona…Miitatra ho an’ny ho avy rehefa dila ity ady ity ny fery, voatery hanarina ny toe-tsaina izay efa mirefarefa nohon’ny fianjadin’ny fahasahiranana sy ny fahantrana. Ny ady anefa tsy maintsy atao, raha izao no mitohy tsy itan’ny hoe miara-petsa ampitoerana eto daholo, fa ho rendrika ny ankamaron’ny mponina.
Hany fomba fiarovana angamba dia dinam-bahoaka, izay ampiharin’ny fokonolona isam-bohitra. Ny fikitakitana mety ataon’ny mpitandro filaminana vitsivitsy mety tsy ahovoka olona aman-jatony fa fandrahonan’ny mponina izay be noho ny vitsy mety ampisalasala na ampihemotra an’izay mandalo tanàna tsy manaja ny fepetra tokony tanterahana. Ny sarotra amin’izay anefa dia tsy maintsy amin’ny ireo andrimaso-pokolona ihany izay tsy zatra andrikitra no mety hirona amin’ny fanjakazakana noho ilay fahefana nankinina aminy. Tsy mora ny fiandraiketana fahefana izay, anefa ifampitoloman’ny maro toy ny tazana.
Andriamalazaray Andoniaina : «Ilaina ny fandraisana andraikitra» 14/07/2020
Fotodrafitrasa ; misy manao amboletra fanorenana etsy 67 ha 14/07/2020
Ady amin’ny covid-19 : nanome fitaovana marobe ny Frantsay 14/07/2020
Antenimierampirenena : depiote sy mpiasa eny Tsimbazaza 11 tratran’ny Covid-19 14/07/2020
Valanaretina… tsy fandriampahalemana 14/07/2020